Indlu encane enhliziyweni phakathi kwezilwandle ezimbili. - I-Airbnb
Indlu encane enhliziyweni phakathi kwezilwandle ezimbili.
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Anne-Sophie
Indlu encane itholakala endaweni enhliziyweni ye-Entre deux Mers. Kubathandi bewayini, ukuzola, leli kotishi elitholakala endaweni eluhlaza okotshani enkabeni yedolobhana, amakhilomitha ayi-15 ukusuka eSt-Emilion, amakhilomitha angama-36 ukusuka eBordeaux kanye namakhilomitha angama-30 ukusuka ePérigord. Umhlobiso uhlanganisa ukuzola nokunethezeka.
Woza uzojabulela indawo yasemaphandleni, ezolile, ingadi kanye nedamu lokubhukuda.
Ungakwazi ukuwela umzila wewayini, wenze izintaba eziningi.
Abanikazi banenja edlala kakhulu, uRoméo.
Ikotishi selivuselelwe ngokuphelele, litholakala endaweni enamathiselwe itshe lendawo, uzobe uzimele lapho.
Siqukethe ekhishini esikhulu owufanelekela lapho ungathatha ukudla kwakho, ikamelo ophilayo, ekamelweni lokulala abantu 2 (embhedeni 160X200) nge yokugezela yayo elakhelene, zonke ukuvulwa ungene ithala kwenye ezingeni ngenhloso echibini lokubhukuda..
Phezulu: igumbi lokulala labantu abangu-2 elinemibhede emi-2 ehlukene noma umbhede ongu-1 ongu-160, kumbhede ongu-1 we-mezzanine (140X200).
Ingadi exhumene nendawo yakho yokuhlala izokuvumela ukuthi ujabulele ukudla kwakho noma izikhathi zokuphumula.
Idolobhana laseNaujan et Postiac litholakala emkhakheni we-Entre-deux-Mers wezivini ezinkulu, imizuzu eyi-15 ukusuka eSt Emilion, imizuzu engama-20 ukusuka eLibourne, kanye nemizuzu engama-40 ukusuka eBordeaux (isiteshi se-TGV kanye nesikhumulo sezindiza saseMérignac).
Amadolobhana amaningi azungeze iNaujan nePostiac azokunikeza izimakethe zabalimi bendawo, izitolo ezinkulu, ukuvakashela ezinqabeni nezindawo zokudlela ezahlukahlukene.
Ikotishi linendawo yalo yokupaka yamahhala yemoto yakho.
U-Laurent no-Anne-Sophie bahlale bemagange ukwamukela abahambi abasha. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nabo ukuze uqale ukuxoxa ngemininingwane.
idolobhana elincane lase-Entre deux Mers.
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre gite, de vous donner des adresses et conseils pour que vous vous sentiez comme chez vous.
Laurent et Anne-Sophie